Yuusuf Dabageed oo ka hadlay xil ka qaadistii lagu sameeyay iyo sirta ku duugan arrinkaas (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Yuusuf Dabageed oo ka hadlay xil ka qaadistii lagu sameeyay iyo sirta ku duugan arrinkaas (DHAGEYSO)
Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa si kulul uga hadlay xil ka qaadistii shalay uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Yuusuf Dabageed oo warbaahinta la hadlay ayaa xil ka qaadistaasi ku tilmaamay mid lagu deg-degay islamarkaana aan isaga lagala tashan, isagoona sidoo kale tilmaamay in warkaasi uu ka maqlay kaliya, qaar ka mid ah warbaahinta iyo sidoo kale websiteyada Soomaalida ay leeyihiin.
“Madaxweynaha Hirshabeele xilka wuu iga qaadi karaa, balse xil ka qaadistaan la igu sameeyay ma aheyn mid la igala tashaday, waxaan ka maqlay oo kaliya warbaahinta iyo website-yadda qaarkood, madaxweynaha isagoo aan xafiis yeelan ayuu arrinkaan ku deg-degay, shaqsi ahaan aniga waan la shaqeenayaa gudoomiyaha cusub iyo madaxweynaha” Sidaasi waxaa yiri Yuusuf Dabageed.
Dhinaca kale, warar hoose aynu heleyno ayaa sheegaya in sababta xilka looga qaaday Yuusuf Dabageed ay tahay mid ay labada dhinac isla ogyihiin islamarkaana lagu damacsan yahay in Dabageed xil looga magacaabi rabo golaha wasiiradda ee dhawaan laga soo dhisi doonno maamulka Hirshabeele.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu xil ka qaadis ku sameeyo guddoomiye goboleed, waxayna xil ka-qaadistaan kusoo beegantay, iyadoo uu maamulka Hirshabeele doonayo inay wax ka qabtaan xaaladda amni ee ka jirta gbalka Hiiraan.
Hoos ka dhageyso Yuusuf Dabageed oo ku qanacsan xil ka qaadista lagu sameeyay